ubuntu မရလို့ - MYSTERY ZILLION
lincachara February 2011 edited February 2011 in Help Desk ကျွန်တော်လဲ အူဘန်တုနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ပို့စ်လေးတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အားကျတာနဲ့(လက်တဲ့စမ်းချင်တာလဲပါတာပေါ့)အူဘန်တု ဝူဘီး လေးကိုကျွန်တော့် လပ်တော့ပ် ထဲမှာ ထဲ့ပြီး run ကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။install inside window ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လုပ်လိုက်တယ်၊ဒါနဲ့အားလုံးအစစအဆင်ပြေချောမောစွာနဲ့အင်စတောလုပ်ပြီးတော့ရီစတတ်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ bootပြန်တက်လာတော့dual boot လို့ခေါ်မလားအဲဒီဟာနဲ့ကျွန်တော့်အရင်ရှိပြီးသားwindow7home premium 64 bit version နဲ့ubantu ဆိုပြီးပေါ်လာတာနဲ့ubantuကိုရွေးပေးပြီးenter လုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့စာတမ်းတွေဘာတွေပေါ်လာလိုက်သေးတယ်နောက်တော့ဘာမှထပ်တက်မလာတော့ဘူးဗျ။အရင်ကကျွန်တော်usbနဲ့bootလို့ရတဲ့slax os ကိုလဲလုပ်ကြည့်ဘူးတယ်ဒီလိုပဲကြုံရတာပဲ။သူများ ဒက်စတော့တွေမှာသွားလုပ်ကြည့်တော့အဆင်ပြေတယ်။အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်မလဲဆိုတာလေးကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးကြပါနော်။ubantu အကြောင်းဖတ်ပြီးအရမ်းသုံးကြည့်ချင်နေလို့ပါ။အမ်ဇက်ကညီအစ်ကိုမောင်နှမများပညာပါရမီဆက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။:confused::confused::confused::confused::confused: မှတ်ချက်များ
CalmHill February 2011 edited February 2011 Administrators အခုပြောတဲ့အတိုင်းဆို ဘာဖြစ်တယ်မှန်းလို့မရသေးဘူး အဲဒီတော့ သုံးနေတဲ့ စက်ရဲ့ Brand, Model အတိအကျကိုပြောပါ အဲဒါမှနည်းနည်း ရှာကြည့်လို့ရမယ် နောက်ပြီးတော့ Error message တွေပါတွေ မြင်ရင်လည်း အဲဒါတွေကို ယူလာပြပါ အဲဒါမှသာမှန်းကြည့်ပေးလို့ရမယ်။ lincachara February 2011 edited February 2011 Registered Users ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစက်အမျိုးအစားကHP notebook G-62,64 bit operationပါခင်ဗျာ။အခုလိုဂရုတစိုက်နဲ့ကြည့်ရှူဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။:redface::redface::redface: lincachara February 2011 edited February 2011 Registered Users အပြည့်အစုံကတော့G62 a39SE,4 GB ddr3 ram,processor core i3,ATI mobility graphic 512 mb,320GB Hitachi HDD 7200 rpmတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြဿနာတစ်ခုကသူ့မှာပါတီးရှင်းက၃ခုပါတာမှာ၁ခုကC system,recovery D and HP tool E တို့ပဲပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒါကိုကျွန်တော်ကပါတီးရှင်းနောက်တခုအနေနဲ့Cကိုပြန်ပြီးခွဲထုတ်ထားပါတယ်။အဲဒီကောင်က1ooGBရှိတဲ့ပါတီးရှင်းပါ။သူ့ကိုခွဲတုန်းက my computer >manage>storage>disk management>shrink volume နဲ့ပိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီပါတီးရှင်းက bootable မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တကယ်လို့နောက်ထပ်ဝင်းဒိုးတစ်ခုကိုအဲဒီပါတီးရှင်းကနေပြီး boot ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲဆိုတာလေးပါပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ lincachara February 2011 edited February 2011 Registered Users အခုအူဘန်တုသုံးလို့ရသွားပါပြီ။ubuntu 10.10netbook version နဲ့ပါ။ K February 2011 edited February 2011 Moderators Windows7ဆိုရင် Install inside Windows အဆင်ပြေလို့လား? ကျွန်တော့်တုန်းက နောက်တစ်နည်းနဲ့လုပ်လိုက်ရတယ် :) lincachara February 2011 edited February 2011 Registered Users T.K;83264 said:Windows7ဆိုရင် Install inside Windows အဆင်ပြေလို့လား? ကျွန်တော့်တုန်းက နောက်တစ်နည်းနဲ့လုပ်လိုက်ရတယ် :)
ဟုတ်ကဲ့install inside window နဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးusbပေါ်ကပဲလုပ်လိုက်ရတာ။အစမ်းအနေနဲ့ပေါ့လေ။အစ်ကိုကကောဘယ်လိုလုပ်လို့ရသွားလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါလား။ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla